ukujongana: i-samsung kunye neapos; izixhobo ezifanelekileyo 2 zebhendi yokomelela komzimba sele ili-15% icinyiwe kwi-amazon
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-Samsung kunye neapos ye-Gear Fit 2 Pro band band isele i-15% icinyiwe kwiAmazon
Inkqubo ye- I-Gear Fit 2 Pro Ibhendi yomzimba yatyhilwa ngokusesikweni kwangoko ebutsheni bangoSeptemba e-IFA 2017 yorhwebo kwaye yenza amatyala ayo kwintengiso kungekudala emva koko. Ngokusisiseko, isixhobo esinxibekayo asinakuthengiswa ngaphezulu kwenyanga okanye njalo, kodwa abanye abathengisi sele beqalisile ukulibetha ixabiso laso.
Isamsung yazisa ukuba iGear Fit 2 Pro iya kufumaneka ukuze ithengwe nge $ 200. Nangona kunjalo, iAmazon ngoku ibonelela ngebhanti yokomelela nge- $ 170 nje, kanye nge-15% ngexabiso eliphantsi kune-MSRP. Isixhobo esinxitywayo siyafumaneka kwiDayimani ebomvu kunye neLiquid imibala emnyama, kunye nobukhulu obuncinci kunye nobukhulu.
Kukwiphepha lokuqala i I-Gear Fit 2 Pro ufumana amaxabiso ancitshisiweyo, kodwa njengoko sisondela kuLwesihlanu oMnyama, unokuhendeka ukuba ubambelele ekuthengeni kwakho kwaye ulinde isivumelwano esingcono kwi-Samsung & apos; s band fitness.
Ukuba awukwazi & ampos; linda de kube sekupheleni kwenyanga ezayo, emva koko unokufuna ukungxama kuba oku kunokuba lixesha elilinganiselweyo kwaye iAmazon ayichazi ukuba isivumelwano kufuneka siphele nini.
Uyikhuphela njani kwaye uyifakele uhlaziyo lwe-iOS 7 kwi-iPhone yakho, kwi-iPad okanye kwi-iPod touch
Iikhamera ze-iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus xa kuthelekiswa: ngaba ukhona umahluko omkhulu?
I-Sphero Star Wars BB-8, BB-9E, kunye ne-R2D2 izandla-kwi: ii-droids ezilawulwa yi-smartphone
Ungayitshintsha njani iVerizon, i-AT & T okanye iT-Mobile kwaye ugcine inombolo yakho